ZITA REGERMAN, DATİV | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Top German Courses » Zita rechiGerman -E Hali (Dativ) Kucherechedza
ZITA REGERMAN (DATİV)
Kana usina kudzidza kare, unogona kuona mutauro wechiGerman kare German Akkusativ Play ndiko kuti varumbidze iwe kuongorora yedu chidzidzo ederiz.ism-A hurumende kuti zita usati datif zvakanaka pakudzidza hurumende iri nani uye nyore Akkusativ olacaktır.şi Ngatitaurei zvino kusvikira.
Zita-zita rezita racho rinogadzirwa nekushandura maziso.
Nyaya idzi dzinosiyana nenzira inotevera:
der in artikeli dem,
das artikeli dem,
ein ngaave einem yepakutanga,
eine eta einer einer,
kein artikeli keinem,
keine inoshandiswa kuva mufambi wekupedzisira.
Tinoda ndingadawo huchiti; Kana une ezvinhu zvakasiyana kuti farketmişsinizdir.n kusvikira hunobatsira chaizvo uye kurovedza chokuita nyaya muzita mitemo izvi saka nokukurumidza uye nyore nomuzikamwi mienzaniso Galore panyaya idzi vari chikamu chedu olabilirsiniz.önü uye kurovedza vereceğiz.k akaita nemiwo edza kuita zviitwa panyaya iyi.
Ndapota bvunza rubatsiro kana iwe usingazivi.Cherechedza kuti iwe unowedzera kuita, kupfupisa nguva yako yekudzidza uye zvakanyanya nyaya dzichagara nokusingaperi.
der Schüler (mudzidzi) Sch dem Schüler (mudzidzi)
das Kind (mwana) -------- dem Kind (kumwana)
kufa Frau (mukadzi) -------- der Frau (kumukadzi)
ein Haus (imba) -------- einem Haus (imba)
kein Haus (kwete imba) ----- keinem Haus (kwete imba)
eine Frau (mukadzi) ------ einer Frau (kumukadzi)
keine Frau (kwete mukadzi) ---- keiner Frau (kwete mukadzi)
Mitemo yakapiwa pamusoro apa inoratidzwa pano.
Muuzhinji emazita achirondedzera mamwe mazita kana -n-kuguma zvishongo ivo vari tsamba akawanda mazita ekupedzisira kazhinji -schaft, -heit, -keit, pamusoro, -lee pakati -re aiva mazita -ung. Nyaya inotaurwa zita, "iye anodaro" vaya, zita-A anotendeuka kuva "Der" artikel "Ini" uye shoko muuzhinji kullanılır.y NEW uzhinji kuguma -n kana-zvishongo, uye artikel "Der" mazita All, zita-A nguva dzose muzvizhinji chiperengo kullanılırlar.b kunze chete kuti kurwara hachisi zita zvakakurumbira kuti nenzira muenzaniso izvi yakati vose rinoti, mudzidzi (mudzidzi) nyaya shoko "Der" dir.v shoko iri vaizova uzhinji pakuguma achitora zvishongo. Saka apa kunze geçerlidir.o mashoko aya kuumba shoko riri muzvizhinji uye dative Funga;
KUFUNGA IZVI: Kusarudzwa kweAjjectives maererano neGerman Nouns (Deklination des Adjektivs)
der Mudzidzi (zita uye chiremera chezita) (mudzidzi)
Mudzidzi akafa (muzvizhinji uye nyore)
dem Studenten (kumudzidzi)
Kana iwe ukaongorora zviri pamusoro apa zvakanaka, iwe unogona kunzwisisa zviri pamusoro apa nyore nyore.
Tichaongorora mazita ezvizhinji pasi apa.
Sezvazvinenge zvichizivikanwa, ose ezvizhinji mazita ari mufananidzo wakajeka aive iye zvino Bil die yal.
The yapfuura chitsauko zita-Ndokusaka isu chouwandu akaparadzawo haana kutora kana, muzvizhinji mazita-Ndiyewo chikonzero nei isu kutorawo muuzhinji zita dative kuratidza shanduko, vanoratidza kuchinja muzvizhinji mazita zita-A. (Kana ukaita zvakawanda muviri dzose nedzimwe kunze vari var.eg mumutauro uyu, sezvinoonekwa mune ramangwana, zvinotyisa ramangwana sezvo mitemo aya nyore uye avanoziva varove vaviri mana.)
Kuisa mazita akawanda kuti vave pamberi muzvizhinji rokuti "kufa" artikel "de" ndiyo azvino kuchinja zita uye tsamba "n" ndiyo tsamba rokupedzisira muuzhinji eklenir.eg zita "n" uye zvadaro "n" hakusi zvakakodzera kuti tsamba. (Pamusoro tapota verenga mitemo zvakare)
kufa Väter (vazhinji uye vanoonda) (vanababa)
kubva paVätern (muzhinji uye a)
Sezvinoonekwa mune muenzaniso kumusoro "kufa" artikelini "kuti" akaita muzita uye pakuguma muzvizhinji "s" nokuti hazvina vakatakura tsamba kuva "n" tsamba kuisa.
vakafa Frauen (vazhinji uye vakakombama) vakadzi
kusvika kuFrauen (yakawanda neyoyo)
Sezvataurwa pamusoro apa, "kufa" Articles ari dative kana "kuti" uye zita rinoreva kare dzikava "n" sezvo ikakuruma iri pamwe chete tsamba "n" tsamba vakawedzera.
Iko kushandiswa kwe "kufa" chinhu ine mazita akawanda here? Aiwa. Takambotaura muzvitsauko zvakapfuura kuti mazita asina kunaka anogona kushandiswa nemazita asina kunaka (zvisina kunaka).
Ipapo ngatitangei mienzaniso yezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvisinganzwisisiki.
Sezvo anozivikanwa nemazita akawanda "E" uye "ein" kullanılmıyordu.çünk mashoko "munhu" rinoreva veriyordu.b zvinoreva zita nokusingaperi çelişir.siz muzvizhinji "rimwe bhuku," iwe Wakanzwa chinhu? Mupfungwa iyi, zviri musoro kuti chete "mabhuku" se kullanılmalıdır.o mhosva "e" uye "eine" iri muzvizhinji mienzaniso tsanangura; yksi Buch (bhuku) rimwechete shoko rinoreva chete bhuku rimwe chete.
Mabhuku haagoni kushandiswa se "ein Bücher ü uye anoshandiswa se" Bücher Kitap.
Muchiitiko ichocho hatishandisi ein uye eine mune zita rezita racho.
KUFUNGA IZVI: Nhanganyaya kuGerman
ein Buch (iri nyore uye yakasiyana) (a book)
Bücher (iri nyore uye yakawanda) (mabhuku)
Büchern (kuhurumende uye muzhinji) (mabhuku)
kuguma nyaya hachisi shoko neshoko riri muenzaniso pamusoro apa pamberi buchi tsamba "n" Shoko rakawedzerwa kuti uye kuiswa.
Te keine la inogona kushandiswa pamberi pezita muzvizhinji.
keine Bank (kwete bank) (simple case)
keine Banken (hapana mabhanga) (plain hal-plural)
keinen Banken (kumata mabhanga) (-al-plural)
Pakutanga kwechitsauko isu takataura kuti belirt keine "shanduka kusvika ein keinen Bölüm.
Nesuwo kupa zvakasiyana-siyana kushandiswa nyaya vezita-kupinda muchikamu ichi. mitauro yokumwe tiri romora kana tisingambotauri mumusoro kuti derler.n yavsiye zvachose olmazlar.siz pasina nomusoro zviitwa zvakare uye regai kugadzirisa zvauri kuverenga pano. Zita shoko pachako uye edza zvokuchinja siyana inoti.
GERMAN zita chiitiko yedu VOSE Nyaya dzinokosha mugadziriro yechinangwa okuti CHOKWADI AONE KANA UCHIDA ONE:
Tsanangudzo yezita rechiGerman
Mutauro wechiGerman muchimiro chemashoko
German team inokuda iwe kubudirira ..
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, Chikoro 9 kirasi zita rechierman, 9 kirasi zita rechierman zita remamiriro ekutaura nyaya, 9. kirasi german nyaya inotaura, German dativ, zita rechierman, zita rechiGerman n the 10 class, zita rechiGerman rehurumende ye9. kirasi, zita rechi German n, zita rechiGerman renhau yacho, chi German
23 July 2013, 14: 45
hello nei usina Büchern Büchern? Handina kuzvinzwisisa ipapo?
12 November 2016, 18: 12
15 Mart 2017, 06: 21
Saka pane nyore yedaro refu kufunga nyaya akaedza kushandisa bdlirtisiz kana pasina chaizvo zita kana iye akanga achitaura pamusoro zvakawanda zita ane rinoshandiswa ari narini nyaya aireva zvakawanda zita ane, asi uzhinji akashandisa isingazivikanwi nyaya vanotonga neatly unoziva mumwe kana kutarira nguva vangani.
30 July 2013, 17: 53
Iko ndiyo yekupedzisira muenzaniso mu keinen ???
26 October 2013, 20: 05
shamwari dzakaoma dzakaoma dzimba dzekudzivirira dzimak lazimis ooooffff zor
22 Mart 2018, 22: 31
chi German dativ lecture perfect
25 Mart 2018, 15: 43
Ndinotenda, ndinonzwisisa zviri nani kuGermanx
Zvinotengeswa kunze kwenyika kweGermany zvadzikira - Sondakika Bhizinesi Nhau
Pompeo anosangana naStoltenberg uye Abdulmehdi
Re: Kudzidzisa kuGerman